Soo dejisan PhotoShine 5.4 – Vessoft
Soo dejisan PhotoShine
PhotoShine – fudud ah si ay u isticmaalaan software si ay u abuuraan collages sawirka. software The kuu ogolaanayaa inaad geliso sawiro iyo images gelin arrimo la heli karo. PhotoShine jira waxyaabo badan oo habyaalada qaybiyey qaybaha sida jacaylka, joornaalo, ilmahaaga, riyooyin, gabdhaha, iwm software waxa uu go’an aasaasiga ah ee qalab for wareeg image ah, resizing, qabsado oo ka mid ah dhalaalka iyo duwan. Sidoo kale PhotoShine kuu ogolaanayaa inaad ku darto saamaynta dheeraad ah si ay sawiro ah. software waxay leedahay interface ah dareen leh oo fudud.
arrimo badan oo la heli karo
Qabsashada ah dhalaalka iyo duwan
saamaynta dheeraad ah
Comments on PhotoShine:
PhotoShine Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... PhotoTrip 2.0.1.2315
English, Français, Español, Deutsch... Picasa 3.9.141.259
العربية, English, Українська, Français... Photo! Editor 1.1
Photo Software reserved macaamiloon ee photos tashwiish. Software wuxuu hubinayaa soo kabashada ee tayada image by xoojinta ama wiiqi ah diiradda.
Photo Software ayaa si ay u abuuraan baasaboorka sawiro size iyo kuwa tayadoodii in heerarka dal oo kala duwan. Software ayaa awood u si loogu badalo sawirada qaab lagama maarmaanka u ah daabacaadda.
العربية, English, Українська, Français... Ableton Live 9.7
Editor Audio Software ayaa si ay u abuuraan music studio jawabo kala duwan. Software wuxuu taageeraa set badan oo ah alaabtii muusikada oo tiro badan oo ah saamaynta dhawaaqa kala duwan.
English, Українська, Français, Español... GPS Utility 5.28
Maps Tool si loo xakameeyo oo ka arrinsashada macluumaad GPS ah. Software ka kooban yahay dhowr ah qalab waxtar leh oo kuu ogolaanaya in aad in ay is dhaafsadaan xogta la codsiyada ama qalab kale.
Downloaders Tababaraha ayaa habboon in la download video files ka Facebook iyo adeegyada kale ee caanka ah. Software ayaa awood u si loogu badalo videos ee qaabab kala duwan audio iyo soo saaro ay raad audio ka video files.